ဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူမှ”နင့်သမီးကို ဇင်ဝိုင်းတို့ ခုတ်သတ်လို့ သေပြီ”ဟုပြောပြရာ...! - Thadin
HomeNEWSဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူမှ”နင့်သမီးကို ဇင်ဝိုင်းတို့ ခုတ်သတ်လို့ သေပြီ”ဟုပြောပြရာ…!
May 17, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူမှ”နင့်သမီးကို ဇင်ဝိုင်းတို့ ခုတ်သတ်လို့ သေပြီ”ဟုပြောပြရာ…!
မတ္တရာမြို့နယ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး အသတ်ခံရ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မတ္တရာမြို့နယ် အောက်တောင်ကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု ဆောက်ခြုံပေါက်ကျေးရွာနေ ဦးမောင်ဟန်သည် နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မြဝင်းမှာ ဦးခေါင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ရောက်ရှိလာသဖြင့် အကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းရာ ဇနီးဖြစ်သူမှနင့်သမီး ကို ဇင်ဝိုင်းတို့ သမီးယောက်ဖနှစ်ယောက် ခုတ်သတ်လို့ သေပြီ´ဟုပြောပြရာ ဦးမောင်ဟန်မှဘယ်လိုဖြစ်လို့ခုတ်တာလဲ´ဟု မေးမြန်းရာ လွန်ခဲ့သော ၂ လကျော်ခန့်က သမီးဖြစ်သူ မပန်းအိဖြူ(၂၄)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇင်ဝိုင်း(၂၆)နှစ်တို့(၂)ဦး စကားများရန်ဖြစ်ပြီး
မပန်းအိဖြူမှာ မိဘများနေအိမ်သို့ လာရောက်နေထိုင်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉ မေ ၁၅ ၁၀.၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ဇင်ဝိုင်းမှ ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မဖြူစင်မိုး (၁၀)လခန့်အရွယ်ရှိသူအား ဇနီးဖြစ်သူ လက်ထဲမှလုယူခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့(၂)ဦး စကားများခဲ့ကြပြီးနောက် ၎င်းညနေ ၁၅၀၀ အချိန်ခန့်တွင် မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြဝင်းနှင့်သမီးဖြစ်သူ မပန်းအိဖြူတို့(၂)ဦးသည် မတ္တရာမြို့မှ ဆောက်ခြုံပေါက်ကျေးရွာသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဈေးဝယ်ပြန်လာစဉ် မြစ်ကောက်ကျေးရွာအနောက်ဘက် ရေလိုက်မြောင်းအနီးအရောက်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇင်ဝိုင်းနှင့်၎င်း၏သမီးယောက်ဖဖြစ်သူ
မျိုးလွင်(၃၂)နှစ် တို့(၂)ဦးမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ စီးနင်းမောင်းနှင်လာကြပြီး ဒေါ်မြဝင်းနှင့်သမီးဖြစ်သူ မပန်းအိဖြူတို့ စီးနင်းမောင်းနှင်လာသည့် ဆိုက်ကယ်အား မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့ရာ သားအမိနှစ်ဦးစီးနင်းသည့်ဆိုက်ကယ်လဲကျသွားစဉ် မျိုးလွင်မှ ဒေါ်မြဝင်းအား နောက်မှသိုင်းချုပ်ပြီး သားမက်ဖြစ်သူ ဇင်ဝိုင်းမှ အရှည်တစ်တောင်ခန့်ရှိ ဓါးဦးချွန်ဖြင့် ဦးခေါင်းအား(၂)ချက်ခုတ်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်မြဝင်းမှရုန်းကန်ထွက်ပြေးစဉ်
မပန်းအိဖြူအနီးသို့ ၎င်းတို့(၂)ဦးမှ ရောက်ရှိသွားကြပြီး ဇင်ဝိုင်းမှနင်ရှိနေရင် ရှုပ်နေမှာဘဲ´ဟု ပြောဆိုသံကြားရကာ သမီးဖြစ်သူမှအမေ ပြေးတော့´ဟုအော်ဟစ်ပြောဆိုသံကြားရသဖြင့် ဒေါ်မြဝင်းမှ ပြေးနေရာမှလှည့်ကြည့်ရာ ဇင်ဝိုင်နှင့်မျိုးလွင်တို့(၂)ဦးမှ ဓါးဦးချွန်ဖြင့် မပန်းအိဖြူ၏လည်ပင်းအား လှီးဖြတ်ပြီးနောက် ရေလိုက်မြောင်းအတွင်း ရေနှစ်သတ်နေသည်ကို တွေ့မြင့်ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြသိရှိရသဖြင့် ဦးမောင်ဟန်မှ ဆောက်ခြုံပေါက်ကျေးရွာသူ/သားများ
ဦးမင်းမင်းဦး(အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)အောက်တောင်ကိုင်းကျေးရွာ ဦးမိုးခိုင်(အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)မြစ်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ကုလားကျေးရွာ မတ္တရာမြို့နယ်နေသူတို့နှင့်အတူ အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ရာ မပန်းအိဖြူမှာ ရေလိုက်မြောင်းအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်း ရေနစ်မြုပ်လျှက်သေဆုးံနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် အလောင်းအားဆယ်ယူခဲ့ရာ သမီးဖြစ်သူတွင် လည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက် ဂုတ်ပိုးပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက်တို့ တွေ့ရှိရသည့်ပြင်
ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြဝင်းတွင်လည်း ဝဲမျက်ခုးံပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက် (မစိုးရိမ်ရ)တို့ရရှိခဲ့သဖြင် ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြဝင်းအား ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိအောင်နှင့် သမီးဖြစ်သူမပန်းအိဖြူအား အသက်သေဆုးံသည်အထိ လည်ပင်းအား ဓါးဖြင့်လှီးဖြတ်သွားကြသူဇင်ဝိုင်းနှင့်မျိုးလွင်တို့(၂)ဦးအား အရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းသဖြင့်
မမစ(မတ္တရာ)(ပ)၃၀၅/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄အရ ရေးဖွင့်ပြီး အမှုအား မမစမှူး ဒုရဲမှူးပြေဦးမှ စစ်ဆေးကာ တရားခံမျိုးလွင်အား အမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိပြီး တရားခံဇင်ဝိုင်းအား လိုက်လံဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်
မတ်တရာမွို့နယျတှငျ အမြိုးသမီးတဈဦး အသတျခံရ
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ပွငျဦးလှငျခရိုငျ မတ်တရာမွို့နယျ အောကျတောငျကိုငျးကြေးရှာအုပျစု ဆောကျခွုံပေါကျကြေးရှာနေ ဦးမောငျဟနျသညျ နအေိမျတှငျရှိနစေဉျ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါမွဝငျးမှာ ဦးခေါငျးသှေးထှကျဒဏျရာမြားဖွငျ့ ရောကျရှိလာသဖွငျ့ အကြိုးအကွောငျးမေးမွနျးရာ ဇနီးဖွဈသူမှနငျ့သမီး ကို ဇငျဝိုငျးတို့ သမီးယောကျဖနှဈယောကျ ခုတျသတျလို့ သပွေီ´ဟုပွောပွရာ ဦးမောငျဟနျမှဘယျလိုဖွဈလို့ခုတျတာလဲ´ဟု မေးမွနျးရာ လှနျခဲ့သော ၂ လကြျောခနျ့က သမီးဖွဈသူ မပနျးအိဖွူ(၂၄)နှဈနှငျ့ ၎င်းငျး၏ခငျပှနျးဖွဈသူ ဇငျဝိုငျး(၂၆)နှဈတို့(၂)ဦး စကားမြားရနျဖွဈပွီး
မပနျးအိဖွူမှာ မိဘမြားနအေိမျသို့ လာရောကျနထေိုငျခဲ့ရာမှ ၂၀၁၉ မေ ၁၅ ၁၀.၀၀ အခြိနျခနျ့တှငျ ဇငျဝိုငျးမှ ၎င်းငျး၏သမီးဖွဈသူ မဖွူစငျမိုး (၁၀)လခနျ့အရှယျရှိသူအား ဇနီးဖွဈသူ လကျထဲမှလုယူခဲ့သဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့(၂)ဦး စကားမြားခဲ့ကွပွီးနောကျ ၎င်းငျးညနေ ၁၅၀၀ အခြိနျခနျ့တှငျ မိခငျဖွဈသူဒျေါမွဝငျးနှငျ့သမီးဖွဈသူ မပနျးအိဖွူတို့(၂)ဦးသညျ မတ်တရာမွို့မှ ဆောကျခွုံပေါကျကြေးရှာသို့ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ဈေးဝယျပွနျလာစဉျ မွဈကောကျကြေးရှာအနောကျဘကျ ရလေိုကျမွောငျးအနီးအရောကျတှငျ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဇငျဝိုငျးနှငျ့၎င်းငျး၏သမီးယောကျဖဖွဈသူ
မြိုးလှငျ(၃၂)နှဈ တို့(၂)ဦးမှ ဆိုငျကယျဖွငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှ စီးနငျးမောငျးနှငျလာကွပွီး ဒျေါမွဝငျးနှငျ့သမီးဖွဈသူ မပနျးအိဖွူတို့ စီးနငျးမောငျးနှငျလာသညျ့ ဆိုကျကယျအား မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှ ဝငျရောကျတိုကျခဲ့ရာ သားအမိနှဈဦးစီးနငျးသညျ့ဆိုကျကယျလဲကသြှားစဉျ မြိုးလှငျမှ ဒျေါမွဝငျးအား နောကျမှသိုငျးခြုပျပွီး သားမကျဖွဈသူ ဇငျဝိုငျးမှ အရှညျတဈတောငျခနျ့ရှိ ဓါးဦးခြှနျဖွငျ့ ဦးခေါငျးအား(၂)ခကျြခုတျလိုကျသဖွငျ့ ဒျေါမွဝငျးမှရုနျးကနျထှကျပွေးစဉျ
မပနျးအိဖွူအနီးသို့ ၎င်းငျးတို့(၂)ဦးမှ ရောကျရှိသှားကွပွီး ဇငျဝိုငျးမှနငျရှိနရေငျ ရှုပျနမှောဘဲ´ဟု ပွောဆိုသံကွားရကာ သမီးဖွဈသူမှအမေ ပွေးတော့´ဟုအျောဟဈပွောဆိုသံကွားရသဖွငျ့ ဒျေါမွဝငျးမှ ပွေးနရောမှလှညျ့ကွညျ့ရာ ဇငျဝိုငျနှငျ့မြိုးလှငျတို့(၂)ဦးမှ ဓါးဦးခြှနျဖွငျ့ မပနျးအိဖွူ၏လညျပငျးအား လှီးဖွတျပွီးနောကျ ရလေိုကျမွောငျးအတှငျး ရနှေဈသတျနသေညျကို တှမွေ့ငျ့ခဲ့ရကွောငျး ပွောပွသိရှိရသဖွငျ့ ဦးမောငျဟနျမှ ဆောကျခွုံပေါကျကြေးရှာသူ/သားမြား
ဦးမငျးမငျးဦး(အုပျခြုပျရေးမှူး)အောကျတောငျကိုငျးကြေးရှာ ဦးမိုးခိုငျ(အုပျခြုပျရေးမှူး)မွဈကောကျကြေးရှာအုပျစု တောငျကုလားကြေးရှာ မတ်တရာမွို့နယျနသေူတို့နှငျ့အတူ အခငျးဖွဈနရောသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှု စဈဆေးခဲ့ရာ မပနျးအိဖွူမှာ ရလေိုကျမွောငျးအတှငျး ခန်ဓာကိုယျအထကျပိုငျး ရနေဈမွုပျလြှကျသဆေုးံနသေညျကို တှရှေိ့ခဲ့သဖွငျ့ အလောငျးအားဆယျယူခဲ့ရာ သမီးဖွဈသူတှငျ လညျပငျးပွတျရှဒဏျရာ(၁)ခကျြ ဂုတျပိုးပွတျရှဒဏျရာ(၁)ခကျြတို့ တှရှေိ့ရသညျ့ပွငျ
ဇနီးဖွဈသူဒျေါမွဝငျးတှငျလညျး ဝဲမကျြခုးံပွတျရှဒဏျရာ(၁)ခကျြ (မစိုးရိမျရ)တို့ရရှိခဲ့သဖွငျ ဇနီးဖွဈသူဒျေါမွဝငျးအား ပွတျရှဒဏျရာရရှိအောငျနှငျ့ သမီးဖွဈသူမပနျးအိဖွူအား အသကျသဆေုးံသညျအထိ လညျပငျးအား ဓါးဖွငျ့လှီးဖွတျသှားကွသူဇငျဝိုငျးနှငျ့မြိုးလှငျတို့(၂)ဦးအား အရေးယူပေးရနျတိုငျတနျးသဖွငျ့
မမစ(မတ်တရာ)(ပ)၃၀၅/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီး ဥပဒပေုဒျမ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄အရ ရေးဖှငျ့ပွီး အမှုအား မမစမှူး ဒုရဲမှူးပွဦေးမှ စဈဆေးကာ တရားခံမြိုးလှငျအား အမှုဖွငျ့ဖမျးဆီးစဈဆေးလြှကျရှိပွီး တရားခံဇငျဝိုငျးအား လိုကျလံဖမျးဆီးဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ
This Year : 232275
Total Users : 591299
Total views : 2712381